သုံးစွဲမှု term - Mobhax
ကြှနျုပျတို့၏ website browsing အားဖြင့်သင်တို့ကိုအသုံးပြုခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်များကိုရန်သဘောတူ
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website သင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာအသုံးပြုနိုင်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာအသုံးပြုမှုသင့်ကိုယ်ပိုင်သမ္မာသတိနှင့်အန္တရာယ်မှာသငျသညျကြှနျုပျတို့၏အကွောငျးအရာ၏အသုံးပြုမှုအနေဖြင့်ရလဒ်များကြောင့်အချက်အလက်များ၏ကွန်ပျူတာ system သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုတစ်စုံတစ်ရာထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအတွက်တစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်ယူလိမ့်မည်ဟုပြု. သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website မဆိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်မပေးကြောင်းနားလည်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်တင်ဆက်အကြောင်းအရာ၏အဘယ်သူမျှမကျွန်တော်တို့ရဲ့ server များပေါ်တွင်တည်ခင်းဧည်ဖြစ်ပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်နှင့်ဆက်စပ်သို့မဟုတ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Third-party websites များအတွက်တာဝန်မယူနေ.
သငျသညျဘယ်နေရာမှာမဆိုကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာ mirror သို့မဟုတ် upload တင်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်. သင်သာပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် Non-စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်းများအတွက်အသုံးပြုရန်စေခြင်းငှါ. သင်သည်မည်သည့်လမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာမဆိုအင်ဂျင်နီယာ reverse သို့မဟုတ်ဖယ်ရှား-compile မပြုစေခြင်းငှါ. အဆိုပါအကြောင်းအရာများသာပညာရေးရည်ရွယ်ချက်သည်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုမျှအာမခံချက်ရှိပါတယ်. အားလုံးသင့်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဖျော်ဖြေကြသည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူဖန်တီးသောအကြောင်းအရာများကို Non-စီးပွားရေးနှင့် non-profit ပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်နေသူများကဖန်တီး.
သင်ကစီမံခန့်ခွဲသူထံမှသဘောတူခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဤ website ကိုဖွင့်အကြောင်းအရာမဆိုအသုံးမပြုစေခြင်းငှါ. သင်စီမံခန့်ခွဲသူသဘောတူညီချက်မပါဘဲကြှနျုပျတို့၏ website ရဲ့အကြောင်းအရာကိုအသုံးပြုလျှင်, သင်က အသုံးပြု. စေသောမည်သည့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအတွက်ထိုက်ပါလိမ့်မည်.
အားလုံးတင်သွင်းဧည့်သည် post ကိုသို့မဟုတ်အလုပ်ကျွန်တော်တို့၏တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်. သင်ကဆောင်းပါးအားလုံးကိုအခွင့်အရေးများကိုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်. ကျနော်တို့အကြောင်းကြားစာမပါဘဲမည်သည့်လမ်းများတွင် post ကိုအပြီးပိုင်ခွင့်ရှိသည်.
ဤ blog မှသာပညာရေးရည်ရွယ်ချက်အဘို့ဖန်တီးခဲ့.
အဘယ်သူမျှမဖိုင်ဆာဗာတွင် hosed နှင့်ကျွန်တော်လုံးဝသူတို့ကိုမထိန်းချုပ်ရှိရှိပါသည်.
အဆိုပါ admin ရဲ့မည်သည့်အချိန်တွင်မဒီကြေညာချက်ပါအကြောင်းအရာများကိုပြီးနောက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မာသတိမှာ.